Mpikatroka Karate: tsy misy afa-tsy ny fifaninanana nasionaly sisa azo atao | NewsMada
Mpikatroka Karate: tsy misy afa-tsy ny fifaninanana nasionaly sisa azo atao
Misedra olana toy ny taranja hafa ihany koa ny taranja karate, amin’ny fikorontanan’ny fandaharam-potona ho an’ity taom-pilalaovana 2020, vokatry ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus. Efa maro ireo fifaninanana tokony hatao kanefa tsy tanteraka noho ity areti-mandoza ity, izay sarotra ary tsy azo eritreretina mihitsy ny hanenjehana izany aorin’ny fihibohana. Nambaran’ny ankamaroan’ny klioba sy ny mpikatroka fa tsy misy afa-tsy ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara sisa azo atao rehefa miverina amin’ny laoniny ny toe-draharaha, ka afaka manatanteraka hetsika ara-panatanjahantena amin’izay isika eto Madagasikara.
Etsy an-kilany, raha ny hevitr’ireo mpitantana Dojo sasantsasany, “aleo ihany manara-dalana toy ny taranja rehetra ka hiandry am-pitoniana ny fahataperan’ny hamehana ara-pahasalamana vao maminavina izay tokony hatao”, hoy izy ireo. Ny toeram-pikotranana rahateo tsy misokatra ka hataon’ny ankizy ahoana ny hanomana izany fifaninanana nasionaly izany.
Samy manahy mafy ireo mpisehatra eo anivon’ny taranja Karate eto Madagasikara, amin’ny mety hisian’ny taona fotsy, raha ny fanazavana hatrany. Miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha anefa izany rehetra izany.